शान्त संवृद्ध नेपाल बनाउनको लागि विवेकशील नेतृत्व
[su_tabs][su_tab title=”अध्यक्षको कार्यालय“]
उज्वल थापा – अध्यक्ष
नेपाललाई चाहिएको २१ औं शताव्दी सापेक्ष नेतृत्व बनाउने यात्रा अझ दह्रो बन्ने भएको छ। विवेकशील नेपालीमा जोश र होश दुबै भएको नेतृत्व टोली साथ भएको हुँदा म निकै उत्साहित छु।मेरो परिवारमा म र मेरी श्रीमती छौँ। १३ बर्ष देखि सूचना प्रविधिको सानो व्यवसाय चलाउदैँ अाएको छु। स्याङ्जाको पुर्ख्यौली गाउँमा कफी कृषक सहकारी चलाएर त्यहाँ पनि समय दिइरहेको छु। अमेरिकाको बेनिन्गटन कलेजबाट “मल्टिमिडिया” मा स्नातक (BA) गरेको छु।
हरपल अाफू र अाफ्नो समाजप्रति जिम्मेवार रहन सक्ने कुनै पनि मनुष्यलाई म विवेकशील ठान्दछुँ।
क्यान्सरलाई ब्रुफिन खाएर ठीक हुँदैन, केमोथेरापी नै चाहिन्छ भने झैं अहिले राजनीतिक कु-संस्कारलाई हटाउन बाहिर बसी सुधार्न खोज्नुभन्दा राजनीतिमा सु-संस्कार ल्याउने यस्तो विवेकशील संगठन-सन्जाल-शक्ति बनाउनु पर्छ जसले सकारात्मक भाईरस जस्तो गरी राजनीति गर्ने सबैमा सु-संस्कार सार्छ। राजनीतिमा सु-संस्कार ल्याउन म राजनीतिमा लागेको हुँ। राजनीति सुधारे शान्त र संमृद्ध नेपाल हाम्रै कालमा बन्छ !
विवेकशील नेपालीलाई अबको ५ वर्षमा सक्षम नेतृत्व बनाउने इन्जिन (प्रणाली) बनाई अाफूभन्दा सक्षम नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने जमर्को लिएको छु। मेरो उद्देश्य दक्ष नेपालीहरुलाई जोडेर शान्त-संमृद्ध नेपाल बनाउने दिशामा लम्काउनु हो।
सबै साथीहरुलाई अाफ्नो सर्वोत्कृष्टता देखाउनतिर धकेल्ने उद्देश्य बोकेको छु।
यो योग्यतामुखी संगठन हो जहाँ देशलाई राम्रो गर्छु भन्ने हरेकले ढुक्कसँग हाम्फालेर देशको सेवा गर्न ठाउँ दिइन्छ। यसले अात्माबाट समानतालाई अँगालेको छ। विविधताबीच एकता ल्याउन हर पल प्रयासरत छ।
अब विवेकशील नेपालीको प्रमुख चुनौती भनेको यस भित्र नेतृत्वको संख्या बढाउनु पर्नेछ। त्यसैले समाजमा अा-अाफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गरेका नेपालीहरुलाई समय दिलाई पूर्ण बनाउन पहल गर्ने छु।
सक्षम नेतृत्व बनाए मात्र नेपाल समृद्ध बन्छ हाम्रै कालमा। समस्या र समाधान यसैमा छ। हरेक नेपालीमा यही विवेक जगाउन सक्नु नै हाम्रो चुनौती हो। नागरिकलाई विवेकशील, समाजलाई उद्दमशील र राज्यलाई हितकारी अनि सरकारलाई सेवक बनाउने चेष्ठा गर्नु छ हामी मिलेर।
अहिले त तन, मन र धन सबै विवेकशील नेपालीकै इन्जिन बनाउन मै समर्पित छु। समय मिलाएको बेला खेलकुद देखि कम्प्युटरमा डिजाइनको काम गर्छु अनि ईन्टरनेटबाट संसारका विभिन्न विधामा ज्ञान हासिल गर्न र संसारमा हुँदै गरेका अाशालाग्दा आविष्कार र अनुसन्धानका बारेमा सुझबुझ गर्न समय लगानी गर्दछु।
देशप्रति चासो राख्ने साथीहरुलाई एउटै प्रश्न : तपाईँ विकल्प कुर्दै बस्ने कि अब अाफै बनाउन तात्तिने ?
उहाँको कथा अरु पढ्नको लागि यहाँ जानुहोला ।
[/su_tab][su_tab title=”व्यवस्थापिका समिति“]
गोबिन्द नारायण, व्यवस्थापिका प्रमुख
मेरो क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कृषिमा आधारित ग्रामीण विकास हो । हालसालैबाट मैले लप्सी फेदी, का
ठमाडौँमा ‘गोठ नगरकोट’ संचालन गर्न गइरहेको छु । त्यो एक वातावरण मैत्री बाख्रा फर्म हो जसमा मैले सिकेका रैथाने उपाय संगसंगै अमेरिकी र जापानी कृषि व्यवस्थापकीय पद्दतिको प्रयोग हुनेछ ।
विवेकशील नेपालीमा म यसको सांगठनिक आधारशिला तयार गर्ने र यसलाई विस्तार गर्ने काममा जुटेको छु । मलाई विश्वास छ, तपाईं हामी सबैको सु-कर्मबाट नेपाललाई शान्त, सुखद र समृद्भ बनाउन सक्ने छौँ । यस महत्वपूर्ण समयमा हामी सबैले राष्ट्रको लागि अन्य क्षेत्रमा जस्तै सुसंकृत राजनीतिक र दिगो आर्थिक विकासका लागि थप योगदान दिनु पर्छ ।
रमेश पौडेल, व्यवस्थापिका सदस्य
केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएपछि मलाई पार्टी र देशका प्रति आफ्नो जिम्मेवारी थप भएको महशुस भएको छ l
पार्टीका सदस्यहरुले म प्रति दर्शाउनुभएको विश्वासलाई भोलिका दिनमा कसरी मैले व्यवहारबाट प्रमाणित गर्न सक्छु र यो पार्टीलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने कार्यमा मेरो भूमिका र योगदान कहाँ-कहाँ रहन्छ भन्ने विषयमा म अध्ययनको चरणबाट गुज्रंदै छु l यस कार्यकालको प्रारम्भिक चरणमा दलको नीतिहरुलाई समयानुकूल निर्माण, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्नमा मैले आफ्नो भूमिका खेल्न सक्ने बिश्वास लिएको छु l
म ३७ वर्ष अघि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मानेश्वारा गाविस, वडा नं. ६ मा जन्मिएको हुँ l हाल म, श्रीमती र दुई छोराहरुसहित मध्यपुर थिमी नगरपालिका – ५, बोडे, भक्तपुरमा बस्छु l मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको छु र नेदरल्याण्डस्थित Van Hall Larenstein (Part of Wageningen University) बाट Master of Management of Development (Specialization: Rural Development and Gender) अध्ययन गरेको छु l
म आफ्नो पेशाको शुरुवाती चरणदेखि नै सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील छु l यसक्रममा मैले विभिन्न संघसंस्थाका परियोजनाहरुमा काम गरेको छु l हाल, म विकास परामर्शदाताका रूपमा नेदरल्याण्डसमा स्थापित Unica Foundation को नेपालस्थित परियोजनाहरु हेर्ने गर्छु l
मेरा लागि विवेकशील बन्नु भनेको अहिलेको निराशाजनक नेपाली राजनीतिको एक भरपर्दो विकल्प बन्नु हो l साथै, विवकेशीलका मूल्य र मान्यताहरु आफ्ना दैनिक जीवनमा लागू गरी आफू बदलिंदै समाज परिवर्तनमा हिस्सेदारी लिनु हो l आफू, घर-परिवार, गाउँ-शहर र देशैभरि विवेकशीलका मूल्य र मान्यतालाई क्रमश: स्थापित गराउन मैले आफू राजनीतिमा लाग्ने निर्णय लिएको हुँ l
विगतमा मैले केन्द्रीय सदस्यको रूपमा न्यायपरिषदमा रही काम गरें l अहिले म व्यवस्थापिका समितिको सदस्यमा निर्वाचित भएको छु l मैले यहाँ आफ्नो भूमिका विवेकशीलको नीति र सिद्धान्तहरुको समयानुकूल परिमार्जन गर्ने र आवश्यकता अनुसार नयाँ नीतिहरु निर्माण गर्ने कार्यमा देखेको छु l यसका लागि नेपाल भित्र र बाहिर प्रयोगमा आएका उत्तम प्रयोगहरुलाई अध्ययन गरी समयसापेक्ष रूपमा नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा लागू गर्ने / गराउने मेरो प्रयत्न हुनेछ l
म सामूहिक कार्यमा विश्वास गर्छु l अहिले निकै क्षमातावान साथीहरु विवेकशील नेपालीमा जोडिन आइपुग्नुभएको छ l म नेपाल र विदेशका विभिन्न भू-भागबाट विवेकशीलमा जोडिनु भएका सदस्यहरुबाट सिक्ने, वहाँहरुलाई सुन्ने र वहाँहरुसंगै मिलेर काम गर्ने उद्देश्य बोकेर विवेकशील नेपालीको नेतृत्वमा आएको छु l हरदम नयाँ कुरा सिक्ने र त्यसलाई व्यवहारको कसीमा परीक्षण गर्ने तर्फ म सधैं सजग रहने छु l र, यो नै मेरो उद्देश्य प्राप्तिको लागि सहयोगी हुन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ l
विवेकशील सोच भएका मानिसहरुको सघन उपस्थिति नै विवेकशीलको सवल एवं राम्रो पक्ष हो l सुधार गर्नु पर्ने पक्षको बारेमा भन्नुपर्दा म विवेकशील नेपालका कुना-कन्दरामा पुगेको; गरिबी र अशिक्षाले आक्रान्त सुदूर ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरेको जस्ता विषयका कल्पना मात्रले उत्साहित हुने गर्दछु l
सबै ठूला समस्याका जड स-साना समस्याबाट शुरु हुन्छ भन्ने म ठान्दछु l नेपालको मुख्य समस्या भनेको मानिसहरु ‘सरकारले केही गरेन’ भनेर गुनासो गरिरहने र त्यही सरकार मध्ये कै कुनै न कुनै दललाई समर्थन पनि गरिरहने विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो l यसको अर्थ मानिसहरुमा ‘हामी आफैं विकल्प बन्न सक्षम छौं’ भन्ने विवेक जगाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो l मेरा तमाम् प्रयास सोही विवेक जगाउनका खातिर हुनेछ l र, त्यसको सुरुवात पंक्तिमा कसरी बस्ने, समयमा कसरी पुग्ने, अरुले बोलेको कसरी धैर्यपूर्वक सुन्ने, जस्ता स-साना अभ्यासहरु मार्फत गर्नेछु l
म फुर्सदको समय नयाँ ठाउँहरु घुमफिर गर्न, पुस्तक पढ्न र नयाँ मानिसहरुसँग भेटघाट एवं कुराकानी गर्न रुचाउँछु l
मिलन पाण्डे, व्यवस्थापिका सदस्य
पुरा नाम: मिलन पाण्डे
शिक्षा: सिविल इन्जिनियरिङ्ग, नेतृत्व विकास प्रतिष्ठानबाट नेतृत्व विकासको कोर्स
पेशा: शिक्षण , उद्यमी ( कपडाको पसल )
गृह जिल्ला: काठमाडौँ
उमेर: २६ वर्ष
हामी विवेकशील नेपालीलाई पृथक राजनैतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्दै छौँ। सकारात्मक सोच भएका मानिसहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने, खराब सोचहरुलाई विस्थापित गर्दै छौँ।
” एउटा कोठा बीस वर्षदेखि अन्धकार छ भने त्यसलाई उज्यालो पार्न अर्को बीस बर्सै कुर्नु पर्दैन। एक पलनै काफी हुन्छ। “ म त्यो एक पल बनेर अघि बढ्न म तयार छु।
फेसबुक – https://www.facebook.com/MilanLeads
टुइटर – twitter.com/milanpandey22
वेबसाइट – www.milanpandey.com.np
साधना राई,व्यवस्थापिका सदस्य
म माथि धेरै जिम्मेवारी थपिएको महशुस भएको छ जसले गर्दा ममा भएको दक्षता र विवेकशीलता प्रमाणित गर्न प्रेरित गर्छ।
मैले भर्खरै समाज सेवामा स्नातक तह सकाएं। मेरो गृह जिल्ला सोलुखुम्बु हो। मेरो बुवा सामान्य कृषक हुनुहुन्छ। हाम्रो ६ जनाको परिवार हो। मैले मेरो काम गर्न विवेकशीलबाट नै सुरु गरेको हुँ । मैले धेरै संस्थाहरुमा संलग्न भएर काम गरेको छु, महिला हिंसा विरुद्ध कार्यक्रम , सरसफाई कार्यक्रम , ट्राफिक स्वयंसेवकको रुपमा कम गरेको छु, आदि ।
एक सभ्य मानिस जसले आफ्नो काम कर्तव्यप्रति सदा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्दछ त्यसलाई म विवेकशील मान्दछु। धेरै सत्ताहरु बदलियो तर राम्रो काम गर्ने नेत्तृत्व र सच्चा देशप्रति माया गर्ने नेत्तृत्व नभयको कारण अहिले देश र आफूले नै धेरै समस्या भोग्नु परेको र यो प्रकिया निरन्तर चलिरह्यो र यही राजनीतिक कु-संस्कार स्थापित भयो। त्यसैले कसैको आशा नगरी म स्वयं नै यो कु-संस्कृत राजनीति हटाउन राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुँ।
म सबैलाई समेट्ने गरी नीतिको निर्माण गर्न प्रयास गर्नेछु र युवालाई नेत्तृत्व तहमा पुर्याउनका लागि प्रोत्साहन र प्रशिक्षण दिने/ गर्नेछु।
आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरी युवालाई नेत्तृत्व गर्नका लागि प्रोत्साहन गरी कुशल नेत्तृत्व जन्माउने उद्देश्य बोकेको छु। दलको मूल्य मान्यतामा रही आफ्नो उद्देश्यलाई हासिल गर्नेछु।
विवेकशीलको सबै भन्दा राम्रो कुरा यहाँ आफ्नो देशलाई माया गेर्न, देश प्रति बफादार रहन र जिम्मेवार नागरिक बन्न प्रेरित गर्छ।
सबै सदस्यलाई सकृय हुन सिकाउन र विवेकशील हुन प्रशिक्षण दिनेछु।
असक्षम नेत्तृत्व र गैरजिम्मेवार नागरिक हुन् नेपालको समस्या। सक्षम नेत्तृत्वको विकास यसको समाधान।
म साथीहरुसंग छलफल गर्न रुचाउंछु। नेट मार्फत् नयाँ कुराको खोज गर्छु। संगीत सुन्छु, नयाँ ठाउंको भ्रमण गर्छु।
विकल्प कुर्दै बस्ने कि अाफै विकल्प बन्ने
ज्ञानेन्द्र निरौला, व्यवस्थापिका समिति सदस्य
नमस्ते I मेरो नाम ज्ञानेन्द्र निरौला हो I मैले व्यवस्थापनमा स्नातक गरेको छु I पेशाले मेडिकल ट्रान्स्क्रिप्सनिस्ट (८ वर्ष) भएता पनि हाल म परिवारले सन्चालन गरेको कपडाको व्यवसायमा आवद्ध छु I मूलघर झापा (काकरभिट्टा) हो तथापी मेरो पुस्ताका सबै परिवार नै काठमाडौँ बस्दैछौं I
म विवेकशील नेपालीले विभिन्न काल खण्डमा संचालन गर्दै आएका आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक क्रियाकलापहरुमा फरक फरक भूमिकामा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको छु I
मेरो बुझाईमा सुसंस्कृत राजनीति, जो निष्ठामा आधारित हुन्छ, ले नै नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै सम्पूर्ण मुलुकलाई समृद्धि तर्फ अगाडी बढाउने छ जसले उद्यमशीलतालाई हमेसा प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्ने छ I मेरो बुझाईमा राजनीति भनेको सेवाको भावनाले निर्देशित भएको हुनुपर्छ I
युवा उमेर समूहका नागरिकहरुको बाहुल्यता हरेको मुलुकमा युवाले राजनीतिमा अग्रसरता लिन अब चुक्नु हुँदैन I तसर्थ, २१ औं शताब्दी सापेक्ष नीतिहरुको निर्माण तथा सफल प्रयोग मार्फत मुलुकमा दिगो शान्ति तथा समृद्धि लिएर आउन युवाले आफुलाई विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेमा भावी पुस्ताले यस पुस्ता उपर अवश्य गर्व गर्नेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वाश हो I
Facebook : facebook.com/GyanendraLeads
[/su_tab] [su_tab title=”न्यायपालिका समिति“]
अर्जुन सिंह ठकुरी, न्यायपालिका प्रमुख
नमस्ते म अर्जुन, एक नेपाली । अनि एक उद्यमी, प्रशिक्षक र उत्प्रेरक पनि । मैले नेपालमै अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र र सूचना प्रविधि पढेको हुँ । सन् २००६ देखि नेपालमा विभिन्न व्यवसाय गर्दै, रोजगारीको सिर्जना, उधमशिलता सम्वन्धि प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण र आफ्नो ज्ञान / शीप बाड्दै आइरहेको छु । हाल म सूचना प्रविधि, शिक्षा र पर्यटनसंग सम्बन्धित व्यवसाय (कम्पनी हरु) को मध्यम बाट स्वदेशमा (स्थानीय रुपमा) रोजगारी सृजना गर्दै छु, साथै नेपाली युवाहरुलाई उधमशील हुन अभिप्रेरित गर्दै छु ।
नेपालमा नेताहरुले सफा राजनीति गरेर नागरिकहरुलाई गरी खाने वातावरण बनाईदिएको भए म मेरो बर्षौको बिशेषज्ञता लाई प्रयोग गरेर अझै धेरै नेपालीहरुको लागि रोजगारी सृजना गर्ने, धेरै लाई उधमशील बनाउने आदि काम गर्थे होला । दशकौं कुरीयो देश बन्ला भनेर, न त बुद्ध आए न त पशुपतिनाथ । न त नेताज्यू हरुको घैटोमा घाम लग्यो । “नेताज्यू हरु” को अति हैन अत्याचारै भए पछि मेरो ४ बर्षे छोरा (र उसको पुस्ताले)ले बन्द हड्ताल, राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरता, कु-शासन, दण्डहीनता आदिका कारणले गरी खाने वातावरण नपाउला भनेर मा आफै राजनीतिमा हाम फालेको हुँ |
नेपालको फोहोर राजनीतिको पोखरीमा हामफालेको धमिलो पानीमा माछा मार्ने ध्याउन्नले हैन, पानीनै सफा गर्ने हो । भ्रस्ट र निकम्मा नेताको विकल्प खोज्ने हैन अब आफै बन्ने हो । भाषण (कुरा) हैन – काम गर्ने हो । रगत हैन , पसिना बगाउने हो । छोराको पालामा हैन, हाम्रै पालामा शान्त र समृद्ध नेपाल बनाउने हो । गरेरै देखाउने हो ! हामीले नगरे कसले? अहिले नगरे कहिले?
आउनुहोस राजनीतिको परिभाषा बदलौ, सोच फेरौ ! शान्त र समृद्ध नेपाल संगै मिलेर बनाऔ !
खेम श्रेष्ठ , न्यायपालिका सदस्य
मेरो घर पोखरा हो। हामी तीन दाजुभाइ, भाउजू, आमा-बुवा ,हजुरबुवा-हजुरआमा र दुई वटा कुकुरसँगैको परिवार छौं।
दाजु-भाउजू अस्ट्रेलिया बस्नु हुन्छ। मैले व्यवस्थापन संकायमा स्नातक गरेको छु। कानुन शास्त्रमा स्नातक अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत छु। साथै राजनीति शास्त्र पनि पढ्दै छु।
मैले Chartered Accountancy दोश्रो तहमा छोडेको हो।
मेरो पारिवारिक व्यापार छ। हामी नेपाली कपडाको सामान बनाउंछौं। टि-सर्टमा नेपालीपन झल्किने र सन्देशमूलक चित्रहरु छाप्छौं।
विवेकशील बन्नु भनेको असल कार्य र विचारलाई आत्मसात गर्नु हो।
राजनीतिमा लाग्नुको कारण सक्षम नेता हुने इच्छा र नेपाललाई नेपालीले चाहेको जस्तो शान्त र समृद्ध मुलुक बनाउन हो।
विवेकशील नेपाली उदाउंदो राजनैतिक शक्ति हो। यसलाई अझै धेरै माझ पुर्याउन आफ्नो भूमिका देख्छु।
न्यायपालिका समितिको सदस्यको रुपमा निर्वाचित भएको छु। मेरो उद्देश्य विवेकशील नेपाली दललाई अन्य दलहरु जस्तै कुसंस्कार र कुबाटोमा लाग्नबाट रोक्ने र सु-संस्कार बोकेको दल बनाउनु हुनेछ। विवेकशील मूल्य-मान्यता, संस्कार र अनुशासन कायम राख्न हर सम्भव प्रयास गर्नेछु।
विवेकशील नेपालीको सबैभन्दा सवल पक्ष भनेको सैद्धान्तिक परिवर्तन भन्दा व्यवहारिक परिवर्तनमा विश्वास राख्छ र वाचा कम र काम बढी गर्छ।
नेतृत्वको खडेरी र युवामा नैराश्यता – नेपालको दुई ठूला समस्याहरु हुन। युवालाई उद्यमशील बनाउने र नयाँ सक्षम नेतृत्वको निर्माण गर्ने विवेकशील नेपालीको बाटोले यी समस्याहरु समाधान गर्न सक्छ। म विवेकशील नेपालीको यसै प्रयासमा आफ्नो समय, ज्ञान, सीप, र श्रोत लगानी गर्दैछु।
खाली समयमा पढ्ने, नयाँ ठाउँ घुम्ने गर्छु। चलचित्र पनि हेर्छु। मलाई शारीरिक सुगठन मन पर्छ।
मेरो हुर्काइ पोखराको लेक साइडमा भएको हो। त्यसैले सानैमा थाहा पाएँ – धेरै विदेशीहरु नेपाल लगायत धेरै देश घुम्दा रहेछन्। तर हामी नेपालीसँग आफ्नै नेपाल पनि घुम्ने क्षमता छैन। मेरो सपना छ – त्यो दिन देख्ने जब हरेक नेपालीले चाहेको दिन विश्वको कुनै पनि राष्ट्र जान on arrival visa प्राप्त गर्न सकुन। यो सम्भव तब हुन्छ जब नेपाल समृद्ध हुन्छ। मलाई दृढ विश्वास छ शान्त र समृद्ध नेपाल बन्नेछ हाम्रै जीवन कालमा।
जीवन श्रेष्ठ , न्यायपालिका सदस्य
इन्जिनियरिंग तथा उर्जा योजनाको विद्यार्थी जीवन श्रेष्ठ उर्जा तथा कृषि उद्यमी हुन्। आफ्ना साथीहरुसंग
मिलेर उर्जा व्यवस्थापन कम्पनी तथा च्याउ खेतीमा संलग्न छन्।
उनको विश्वासमा उर्जा, कृषि तथा पर्यटनको विकासले नेपाललाई समृद्ध बनाउनेछ। उनको विश्वासमा देशभित्र हरेक क्षेत्रमा असीमित सम्भावनाहरु छन्। र, यी सम्भावनाहरु रुपान्तरित हुन हरेक नेपालीले आफ्नो क्षमता बुझ्न आवश्यक छ। उनी र विवेकशील नेपालीको समूह नेपालीलाई आफ्नो क्षमता बुझ्न, उनीहरुमा रहेको नेतृत्वपनलाई उजागर गर्न तथा समृद्ध नेपाल बनाउन लागिपरेको छ।
धिरेन्द्र शाह, न्यायपालिका सदस्य
सबैभन्दा पहिले सम्पूर्ण सक्रिय सदस्यहरूलाई मेरो धन्यवाद। यस विवेकशील नेपाली दलको पहिलो महाधिवेशनमा न्यायपालिका सदस्य पदमा विजयी भएकोमा अझ बढी सशक्त जिम्मेवारी थपिएको महशुस गरेको छु।
मेरो परिवारमा बुवा, आमा, दुई भाइहरु, एक बहिनी, म र मेरी श्रीमती तथा एउटा आठ वर्षको छोरा छ। मेरो बुवा कृषि विकास बैंकको अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुनुहुन्छ। मेरी श्रीमतीले BN nursing पढेकी छिन। उनले करिव ६ वर्ष कान्ति बाल अस्पतालमा काम गरिन। हाल उनी MPH पढ्दै छिन।
मैले कक्षा आठसम्म सरस्वती मा. वि., जनकपुरधाम, मा पूरा गरें। त्यसपछि कक्षा दशसम्म सिद्धार्थ वनस्थली ईन्टिच्युट, काठमाडौँ, मा पूरा गरें। त्यसपछि आई. एस्सी. त्रिचन्द्र बहुमुखी कलेजमा पढें तर पुरा गर्न सकिन।
मैले मेरो जागिर एउटा बोर्डिंङ्ग स्कुलमा math teacher भएर सुरू गरें। त्यस पछाडीको जागिर करिव एक वर्ष एउटा ट्रेडिंग कम्पनीमा territory sales incharge भएर काम गरें। त्यसपछि मैले electrical तथा electronic parts हरू आयात गरी बजारमा वितरण गर्ने उद्देश्यले आफ्नो व्यवसाय सुरू गरें। करिव दश वर्ष पहिले LED बत्तीहरू (जुन हाल आएर निकै लोकप्रिय भएको छ) DC बाट बल्ने बनाएर बजारमा वितरण गरें । व्यवसाय अन्तर्गत Solar electricity घरहरूमा जडान गर्ने काम हाल पनि जारी छ। अहिले मेरो बिजुली सामग्री पसल (खुद्रा) छ।
विवेकशील बन्नु भनेको समाज र देश प्रति जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु हो। देश भित्रको बेथिती-विसंगतिलाई हेरेर चुप लाग्नुको सट्टा त्यस विरुद्ध आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न राजनीतिमा आएको हुँ।
न्यायपालिका सदस्यको हैसियतले मेरो भूमिका विवेकशील नेपाली दलको मूल्य-मान्यता विपरीत कुनै पनि कामहरू गर्न दिने छैन। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन तथा नराम्रो काम गर्नेलाई निरूत्साहित गर्नेछु। पारदर्शिता अझै सशक्त बनाउने छु।
मेरो उद्देश्य न्यायपालिकामा आउने सबै उजुरीहरूलाई निष्पक्ष छानविन गरी छिटो निर्णय गर्नु हो। यस दलको मूल्य-मान्यता विपरीत कार्य गर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु मेरो जिम्मेवारी हो।
एकता, पारदर्शिता तथा काम गर्नेहरूको आ-आफ्नै स्वतन्त्र भूमिका यस दलको राम्रो पक्ष हो। सुधार्नु पर्ने पक्ष अझ बढी समय दिई अझै बढी योगदान यस दललाई दिनु पर्ने हो।
नेपालको ठूलो समस्या भनेको बढ्दै गइरहेको विवेकहीनता हो जसले नेपाली-नेपालीबीच दूरी बढाउँदै छ। यहाँ समस्याको प्रचारप्रसार गरिन्छ तर समाधान खोजिंदैन र वास्ता गरिंदैन। सबैजना समस्याको जरा उखेल्नुको साटो हाँगा भाच्न तिर लाग्छन्। समस्याको पहिचान तथा दिगो समाधानको प्रयासमा तथा समृद्द नेपाल बनाउन मेरो समय खर्चिन्छु।
आफ्नो खाली समय केही पत्रपत्रिका तथा किताब पढ्न, गीत सुन्न, सिनेमा हेर्न तथा समय छ भने घुम्न निकै मन पराउँछु।
मेरो ताजा अनुभव – यस महाधिवेशनमा मेरो जिम्मेवारी खानाको व्यवस्थापनमा थियो। चुनौती ग्याँसको तर त्यसको विकल्पमा दाउरा प्रयोग गरी दिनहुँ करिब ८० जनाको दुई छाक खाना र खाजा कुक भाइहरूले विना कुनै झन्झट पकाएर खुवाए। पूरै महाधिवेशन भरिमा कुनै प्रकारको गुनासो भएन र सबै जनाले खानालाई निकै नै मन पराए। सबैले मलाई धन्यवाद दिए अनि मेरो तर्फबाट पनि सबैलाई मुरी मुरी धन्यवाद।
सुबुना बस्नेत, न्यायपालिका सदस्य
२४ बर्षकि इलाम घर भएकी सुबुना बस्नेत युथ फर ब्लडको राष्ट्रिय महासचिव हुनुहुन्छ। वहाले उद्यमशीलतामा MBA सम्मको अध्ययन गर्नु भएको छ।
वहाले विवेकशील नेपालीमा दुइ बर्षसम्म उद्यमशीलता विकाश अभियानलाई संयोजकत्व प्रदान गर्नु भएको थियो। वहा हाल बिबेकशील नेपालीमा न्यायपालिका अन्तर्गत केन्द्रिय सदस्य हुनु हुन्छ। यस भन्दा अघि वहाले थुप्रै संघ-संस्थाहरुमा बसेर बिभिन्न जिम्मेवारीहरुमा काम गर्नु भएको थियो।
वहाले शतप्रतिशत नेपाली नागरिकहरु रोजगार भएको र आफ्नो समाज प्रति जिम्मेवार भएको त्यसै गरि युवाहरुले पूर्ण जवाफदेहिताका साथ नेतृत्व गरेको मुलुक नेपालको सपना देख्नु हुन्छ।
[/su_tab] [su_tab title=”कार्यपालिका समिति“]
पुकार बम, कार्यपालिका प्रमुख
पहिला भन्दा बढी जिम्मेवारी बोध भएको छ। सक्षम नेतृत्व बनेर देखाउने र बनाउने लक्ष्य बोध भएको छ।
म एक मध्यम वर्गीय सामान्य परिवारमा हुर्किएको व्यक्ति हुँ। संयुक्त परिवारको कान्छी आमा तर्फको जेठो छोरा हुँ। सात जना दिदीहरु, भाइ, आमा र बुवा गरी ११ जनाको परिवार हो जसमा सबै दिदीहरुको विवाह भैसकेको छ। घरमा अहिले बुवा, आमा, भाइ र म छौं। स्थायी घर हसनपुर-५, धनगढी, कैलाली, सुदूर पश्चिम हो। पढाई र कामको सिलसिलामा हाल काठमाडौँमा छु। Tribhuwan University बाट M.A. Sociology/Anthropology र M.A. Political Science तथा Kathmandu University अन्तर्गतको St. Xavier’s College of Social Work बाट Bachelor of Arts in Social Work (BSW) गरेको छु। हाल K AND K International College मा Coordinator
विवेकशील नेपाली बन्नु भनेको जिम्मेवार नागरिक बन्नु हो जसले नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाई समाज र राष्ट्रलाई प्रगति उन्मुख बनाउँछ।
सबै नीतिको माथि राजनीति भएकोले, राजनीतिको कु-संस्कार बदल्न इमान्दार, कर्मठ र सक्षम व्यक्तिहरु अपरिहार्य छ भन्ने ठानेर म राजनीतिमा होमिएको हुँ।
हाल केन्द्रीय कार्यपालिका प्रमुखको भूमिका निकै नै चुनौतीपूर्ण देखेको छु। संगठन र सदस्यहरुमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सांगठनिक चुस्ततामा बढी जोड हुनेछ।
संगठन र सदस्यहरुमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सांगठनिक चुस्ततानै मुख्य उदेश्य हुनेछ। यी उदेश्य हरु हासिल यस प्रकार हुने छ :
क) बलियो monitoring and performance evaluation mechanism बनाएर
ख) बलियो membership drive चलाएर
ग) scientific systematic member recruitment system बाट सदस्यहरुलाइ निरन्तर कुनै न कुनै सकारात्मक कार्यमा लगाएर
घ) सूचनाको हकलाई सम्पूर्ण नेपालीको अचुक हतियार बनाउने अभियान चलाएर- “ जिम्मेवार नागरिक, जवाफदेही नेतृत्व र सेवक सरकार” को निम्ति।
मितव्ययीता (austerity measures) विवेकशील नेपालीको सबै भन्दा सर्वोत्तम गुण हो।
एउटा सुधार हुनु पर्ने कुरा विवेकशील नेपालीको- सदस्यहरुले गर्नु भएको प्रतिबद्धतालाई track गरेर काममा लगाउने।
बारम्बार असक्षम नेतृत्व चुनिनु नेपालको निम्ति ठूलो विडम्बना र अहिले सम्मको सबैभन्दा ठूलो समस्या। यी समस्याहरुको एकमात्र समाधान, सक्षम नेतृत्व तयार गरेर अहिलेको असक्षम नेतृत्वलाई पूर्ण विस्थापन गर्ने जुन विवेकशील नेपालीले गर्दै छ। विकल्प कुरेर होइन , विकल्प आफै बनेर र तयार गरेर।
खाली समयमा डाँडा पाँखा हरियालीमा लामो दूरीको यात्रा र हिंड्न/ डुल्न मन लाग्छ।
विवेकशील राजनीतिमा आउनुको सार्थकता त्यो दिन हुने छ जुन दिन दुर्गम कर्णाली र सुदुरपश्चिम पहाडी भेगका गाउंका साना-साना नानीहरु काठमाडौँका अनाथालयमा बा-आमा हुँदा हुँदै पढ्न लेख्नको लागि अनाथ बनेर आउने दिन रोकिनेछ र त्यही ठाउंमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको पूर्ण प्रबन्ध हुनेछ।
पराइ भूमिमा १०-१५ हजारको निम्ति नेपाली युवाले आफ्नो रगत पसिना साट्नु नपरोस्।
अब आउने दिनहरुमा, राजनीतिमा आउन चाहने सबैभन्दा सक्षम युवापिंढीहरुबीच बेजोडको प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण विवेकशीलले बनाउने छ।
पवन गौतम, कार्यपालिका सदस्य
म धेरै उत्साहित छु तर साथै ठूलो जिम्मेवारी मेरो काँधमा आएको महसुश भएको छ।
म मध्यम आय परिवारबाट आएको हुँ। पुर्ख्यौली घर बागलुङ हो र अहिले चितवनमा बस्छु। आमा बुवा बाहेक मेरो परिवारमा हजुरआमा र दुई बहिनि छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बि बि एस तथा ICAI बाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको डिग्री लिएको छु। अहिले काठमाडौँमा रहेको एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेंसी फर्ममा कार्यरत छु।
विवेकशील बन्नु भनेको आफ्नो जीवनको सानो भन्दा सानो समस्या पनि समाधान गर्न तत्परता देखाउनु र समग्रमा समाजमा सकारात्मकताको बीज रोप्नु हो।
सानै देखि राजनीतिमा मेरो रुचि थियो। तर जुन तरिकाबाट देशमा राजनीति गरिंदै थियो, त्योबाट म खुशी थिइन। विवेकशीलले मलाई समाजमा जकडिएको नकारात्मकता उखेल्न स्थान दिएको छ र म सक्रिय रुपमा आवद्ध छु।
मैले आफैलाई बढी सशक्त पाएको छु किनकि मेरो विचार/कार्यले विवेकशीलको काममा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्नेछ। म मेरो जीवनको प्राथमिकता व्यक्तिगत जीवनभन्दा पनि विवेकशीलतिर सरेको देख्दछु।
केन्द्रीय सदस्यको रुपमा मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको संस्थाको पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम राख्नु हो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएको नाताले ममा गर्ने खुबी छ। संगै, म विवेकशीलको अन्य पक्षको सबलीकरणको लागि आफ्नो टिमलाई सहयोग गर्नेछु।
विवेकशीलको राम्रो पक्ष भनेको यसको पारदर्शिता तथा सदस्यहरुको लगाव हो।
विवेकशीलले आफ्नो संचार क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दछु।
नेपालले भोगिरहेको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको दूरदर्शी तथा जवाफदेही नेतृत्वको अभाव हो। विवेकशीलको माध्यमबाट (नेतृत्व विकास प्रतिष्ठान) हामीले २१ औं शताब्दी सापेक्ष नेतृत्व तयार गर्दैछौं। यसलाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्दै लानुपर्छ।
फुर्सदको समयमा म खेलकुद हेर्न, साहित्य पढ्न तथा साथीहरुसंग घुम्न रुचाउंछु।
अविरल कार्की, कार्यपालिका सदस्य
खुशी छु, साथै झन् जिम्मेवारी बढेको महसुस गरिरहेको छु l पहिला एक जिल्लालाई केही कार्यक्रमको संयोजकत्व गरिरहेको म, अब पूरा देशमा विवेकशील फैलाउने जिम्मेवारी थपिएको छ l देश प्रति केही गर्नु पर्छ भन्ने दायित्वबोध भएको छ l
म एक मध्यम वर्गीय परिवारको हुँ l बुवा वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ l अहिले म समाज विज्ञानको विद्यार्थी हुँ, पछिल्लो शैक्षिक योग्यता A -Level विज्ञानमा गरेको हो l सामाजिक कार्यक्रममा पहिलेदेखि नै ईच्छुक भए पनि यसलाई पेशा बनाउनु हुन्न भनी आफ्नो दैनिक खर्चको लागि कृषि गर्छु l ओखलढुंगामा किवी खेती गरिरहेको छु l केही सामाजिक संस्था पनि चलाउंछु l
विवेकशील एक आस्था हो, एक धर्म हो l विवेकशील राजनैतिक दलभन्दा पनि एक विचार हो l
एक त देश प्रति दायित्वबोधले गर्दा हो अनि हालसम्मको देशको नेतृत्वदेखि असन्तुष्ट भई म र म जस्तै सकारात्मक सोच बोकी हिंड्ने नेतृत्वबाट नेपाललाई विश्वकै एक उत्कृष्ट देश बनाउन म राजनीतिमा छु l
म आफूलाई एक पुलको रुपमा देखिरहेको छु; बिरामी देशलाई एक सक्षम नेतृत्व भेटाइदिने एक पुल किन कि सबै समस्याका म एक्लै समाधान दिन नसकौला तर समाधान दिन सक्ने व्यक्ति खोज्ने काम मेरो हुनेछ l
विवेकशीलमा मेरो दायित्व कार्यपालिकामा छ l व्यवस्थापिकाबाट आएको नियम पालना गर्नु र गराउनु मेरो कर्तव्य हुनेछ l
साथसाथै पार्टीले बनाएको निर्णयलाई जनमानससम्म पुर्याउनु अनि संगठनलाई नै सक्षम बनाउनु पनि मेरो जिम्मेवारी हुन जान्छ l विवेकशीलको मूल्य-मान्यतामा रही यी काम गर्नु मेरो मुख्य चुनौती हुनेछ l
जवाफदेहिता र पारदर्शिता नै विवेकशीलको राम्रो पक्ष हो l राजनीतिमा हामी नयाँ भएकोले हामी सिक्दै छौं। नयाँ आउँदै गरेको नेतृत्व राजनैतिक परिवेशबाट नभएको हुँदा राजनैतिक अभ्यास गर्दै जानु जरुरी छ l
शिक्षा नै विकासको पहिलो खुड्किलो भएको हुँदा देशको शिक्षालाई सुधार्नु जरुरी छ। स्तर अभिवृद्धिको लागि शिक्षामा व्यापक लगानी, सेना र सशस्त्र प्रशासनमा बजेट कटौती गर्ने – शिक्षकको गुणस्तर र संरचनामा लगानी गर्न जरुरी छ l देशलाई अहिले शिक्षित नागरिकहरुको खाँचो छ l
आफ्नो खाली समयमा किताब पढ्ने गर्छु l पछिल्लो समय पढेको किताब ‘करोडौं कस्तुरी’ हो l
अब नेपालीले अर्काको गल्ती देखाएर, आरोप लगाएर मख्ख पर्ने नेताभन्दा समस्याको सही पहिचान गरी समाधानको उपाय खोजी गर्ने सही राजनीतिक दृष्टिकोण भएको राजनेताको खाँचो महसुश गरिरहेका छन । यो खाँचो अब युवा नेतृत्वले पूरा गर्नुपर्छ । भौतिक सुख, व्यक्तिगत स्वार्थ र संकुचित विचारलाई त्यागी समस्यै समस्यामा गुजुल्टिएको नेपाललाई मेसो मिलाएर फुकाल्ने जिम्मा युवा पुस्ताको काँधमा आएको छ । यो आवश्यकता युवा पुस्ताका नेताहरूले बुझेर बढ्न जरुरी छ ।
रन्जु दर्शना, कार्यपालिका सदस्य
केन्द्रीय समितिमा सदस्य हुनु भनेको थप जिम्मेवारी बढ्नु हो। म अहिले निकै जिम्मेवारी र जावाफदेहिता बोध गर्दै आफूले अब भनेका कुराहरु काम मार्फत् पुष्टि गर्न सक्ने भएकोले निकै खुशी छु।
मलाई साथ दिएर केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित गराउनु भएकोमा सम्पूर्ण आदरणीय मित्रजनहरुलाई फेरि पनि यही वाक्य मार्फत् धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
परिवारको साथ मजबुत रहेकै कारणले आज यहाँ छु। वहाँहरुलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मायाले पुल्पुलेर हुर्केकी छोरी, अहिले आफू मात्रै नभई धेरै जनाको मुहारमा हाँसो लिएर आउन मिहेनत साथ खटिरहेकी देख्दा परिवारमा एक किसिमको गौरव अनुभूति भएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातक तहमा विकास शास्त्र अध्ययनरत छु।
विवेकशील बन्नु भनेको विवेक प्रयोग गरेर काम-कार्य गर्नु हो। मेरो लागि विवेकशील बन्नु भनेको विवेकशील मूल्य-मान्यतामा अडिग रही समय सापेक्ष हिसाबले गन्तव्य तर्फ हिंड्नु हो।
राजनीति भनेको, नीतिहरुको राजा हो। देशलाई विकासतर्फ लम्काउन दुई चीज निकै आवश्यक छ, एउटा नीति र अर्को नियत। म यही कारणले राजनीतिमा छु।
म विवेकशील नेपालीसँग २०७० कार्तिक १६ गते देखि जोडिएकी हुँ। त्यस दिनदेखि अहिले सम्म सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै अहिले सम्म नै सक्रिय छु। आफू अलि पुरानै भएकोले पनि म आफ्नो भूमिका विवेकशील नेपालीमा जोडिदै जाने सबैलाई उस्तै स्वामित्व लिनु पर्ने देख्छु। मैले विवेकशील नेपालीमा स्वामित्व लिएकै कारणले मैले आफ्नो शत प्रतिशत दिन सकें।
केन्द्रीय कार्यपालिका समिति सदस्य भएर विवेकशील नेपालीलाई काम-कार्य बाट चिनाउने मेरो उद्देश्य हुनेछ। देश-विदेशमा छरेर रहनु भएका सबै विवेकशील नेपाली साथीहरुबाट सुझाव-सल्लाह लिँदै सबैको स्वामित्व जगाउँदै काम-कार्य बाँड-फाँड गर्दै,आफ्नो टिमसँग काँधमा काँध मिलाई काम गर्दै आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्छु।
हाम्रो (विवेकशीलको) सबै भन्दा राम्रो कुरा भनेको हाम्रो नवीन पृथकता हो। भीडमा पनि विवेकशील नेपाली भनेर आफ्नै मौलिक विशेषताका कारणले ठम्याउन सकिनु यसको सबै भन्दा राम्रो कुरा लाग्छ मलाई। जस्तै, विवेकशीलका टि-शर्टहरुमा लेखिएका नाराहरु, यसका बुद्ध मार्गी मूल्य-मान्यताहरु हुन्। हामीले आफ्ना नयाँ -पुराना सबै सदस्यहरुलाई एकसाथ अघि बढाउन भेट-घाट, अन्तरक्रिया कार्यक्रम पटक-पटक राख्न जरुरी देख्छु जसले गर्दा नयाँ-पुराना साथीहरुबीच आत्मीयता बनाई राख्न टेवा मिल्छ।
नेपालका ठूला समस्याहरु भनेको, शत प्रतिशत शिक्षा नहुनु हो जसको कारणले अनभिज्ञता प्रबल छ, बेरोजगारी अर्को समस्या हो र अर्को समस्या हो असक्षम नेतृत्व जसको कारणले देश विकास तर्फ मोडिन सकेको छैन। यी समस्याहरु भनेका चक्र झैं छन्, एउटा समस्या ठ्याक्कै अर्को समस्याले गर्दा हो र फेरि त्यही चक्र दोहोरिन्छ। म आफै सक्षम नेतृत्व बनी देशलाई समाधानको बाटो तर्फ ल्यैजान कै लागि आफ्नो टिमसंग यहाँ छु।
खाली समयमा म कापीमा चित्र कोर्न रुचाउँछु। आज भोलि भने खाली समय आफ्नो हजुरआमासँग बिताउन रुचाउँछु, आमा आफ्नो जीवन कालको पटकथाहरु सुनाउनु हुन्छ र नातिनी सँग समय बिताउन खोज्नु हुन्छ, म पनि आमासँग आमाको कुराहरु सुन्दै बस्न रमाउँछु।
जीवन बुझ्न चाहने हो भने, हरेक दिन जिउन सिक्नु पर्ने रहेछ l जीवन, जीवन जस्तो बनाउने भए “आफू चिन्न सक्नु पर्ने रहेछ ” , यो सांसारिक मायाजालबाट थोरै भए पनि पन्छेर “म” खोज्न जरुरी छ। अहिले घटिरहेको घटनामा आफू पनि वर्तमान मै उपस्थित भएर त्यसलाई महशुस गर्न जरुरी छ। नत्र फगत ती महंगा मोबाइल, ती चिटिक्क घर र ती रमाइला सम्बन्धहरु!!
जीवनको अन्तिम श्वासमा जीवन मैले जिएँ त भनी आफैलाई सोध्दा, उत्तर खोज्न त्यो दिमाग घुमाउन नपरोस्, बरु एउटा सन्तुष्टिको मुस्कान जाओस्!!!
सुपेन्द्र ताम्राकार, कार्यपालिका सदस्य
नमस्ते म सुपेन्द्र ताम्राकार जिल्ला मोरंग अञ्चल कोशीको स्थायी बासिन्दा हुँ र हाल काठमाडौँ महानगरपालिक वडा नं १४ मा बसोबास गर्छु। म एक सामान्य परिवारबाट आएको व्यक्ति हुँ । मेरो परिवारमा आमा र दाजु हुनुहुन्छ। मैले CMA(Community Medical Assistant)/अ.हे.व सकाएर केही समय अन्य अस्पतालमा काम गरे र विगत चार वर्ष देखि तिलगंगा आँखा केन्द्रमा Eye Health Worker को रूपमा कार्यरत थिए र अहिले Tilganga Institute Of Ophthalmology मा Diploma In Ophthalmic Science पढ्दैछु।
विवेकशील बन्नु भनेको सानो -सानो काम प्रति कसरी जिम्मेवार बन्ने भनी सिकाउनु हो। कुनै ठूलो काम गर्नु पर्दैन विवेकशील बन्नको लागि, तपाईंले बुद्धि भन्दा पनि विवेकको प्रयोग गर्नु हो। सबैले भनेको सुने कि राजनीति फोहोरी खेल हो भनेर, तर म पहिले देखिनै के सोच्थें भने राजनीति फोहोरी खेल हैन, यसका खेलाडीहरुले यसलाई फोहोर बनाइरहेका छन् र यसलाई सफा गर्ने व्यक्तिको कमी छ। त्यसैले राजिनीतिलाई सफा गर्नका निम्ति राजनीतिमा प्रवेश गरेको हुँ ।
म आफ्नो रोल विवेकशीलमा एक त्यस्तो व्यक्तिको रुपमा देख्छु जो सक्षम नेतृत्वलाई विवेकशीलको मूल्य र मान्यतामा रही सधै अगाडि बढाउन सक्छ।
म देशको बिग्रदो अवस्था र त्यसको मूल कारणबाट मुक्ति पाउन कम्मर कसेर लाग्न विवेकशील नेपाली केन्द्रीय समितिमा आएको छु। म वाचा कम काम बढी गरेर यसलाई हासिल गर्न चाहन्छु।
नेपालको ठूलो समस्या भनेको नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपन र भ्रष्टाचार हो। यसलाई जिम्मेवार बनाउन मेरो तर्फबाट हरतरहको कोशिस र उद्यमशीलताको विकास गर्नेछु।
[/su_tab] [su_tab title=”जनसम्पर्क विभाग“]
प्रमुख प्रवक्ता : रमेश पौड्याल
प्रवक्ता(नेपाली भाषा) : साधना राई।, मिलन पाण्डे तथा ज्ञानेन्द्र निरौला
प्रवक्ता(अंग्रेजी भाषा ) : रन्जु दर्शना